Munaasabada Xuska Aas-aaskii Hoyga Agoonta Jigjiga - Cakaara News
Munaasabada Xuska Aas-aaskii Hoyga Agoonta Jigjiga
Jigjiga (CN) Khamiis, 31 December, Munaasabad si heer sare ah loosoo agaasimay oo lagu maamusayay xuska sanadguurada 6aad ee kasoo wareegtay aas aaska dugsiga hoyga agoonta waalidkood nabad diid ku laayay ee magaalada jigjiga ayaa maanta lagu qabtay hoolka macadka maaraynta ee DDSI.
Maamuuska munaasabadan ayaa waxaa kasoo qaybgalay Madaxwayne ku xigeenka DDSI Mudane Mawliid Haayir xassan ahna wasiirka waxbarashada DDSI iyo marti sharaf isugu jirta wasiiro, wasiir ku xigeeno, Mareeya yaal, agaasino, culumo awdiin, odayo, hooyooyin iyo waliba ardayda agoonta ah ee dugsiga.
Munaasabadan ayaa waxaa ugu horayn ka hadalay Madaxwayne ku xigeenka DDSI oo sheegay in dugsigani uu ku aas aasmay baaahi shacab kadib markaa ururka nabad diidka UBBO ay si arxan dara ah u xasuuqday shacab farabadan islamarkaana ay agoomaysay/rajaysay caruur fara badan. Sidoo kale waxa uu sheegay madaxwayne kuxigeenku in ardayda hoyga agoontu dufcadihii ka qalin jabiyay ay jaamacadaha dalka wax kabartaan.
Ugu danbayn waxa uu masuulku hadalkiisi ku gabagabeeyay in ay mudanthay in ilaahay loo mahad celiyo iyo xukuumada wanaagsan ee danaha shacabka utaagan.
Sidookale waxaa kahadlay Maareeyaha Hoyga Agoonta waalid kood ururka nabad diidkau laayay ee Magaalada Jigjiga Mudane Maxamuud Cumar Nuur Oo sheegay in uu aad ugu faraxsanayahay munaasabada xuskan 6aad ee aas aaskii Hoyga agoonta islamarkaana cadeeyay in xukuumada DDSI ay udhamaystirtaya dhamaan adeegyadii hoyga sidookalana waxa uu masuulku cadeyay hadalkiisi in aas aaska hoygan agoonta uu mid kayahay baabintii ururka nabad diidka (UBBO).
Hadaba Munaasabadan ayaa ardayda hoyga agoontu ku soo bandhigeen ciyaaraha Sarkiska, , Dhaantada iyo waliba Ciyaaraha dhaqanka eek ala duwan sidookale waxaa munaasbada lakeenay agab dhaqameedyo & Cuntooyinka Hidaha iyo Dhaqanka.
Gabagabadii ayaa Munaasabadan abaal marin lagu gudoonsiiyay Madaxwayne Ku-xigeenka DDSI ahna Wasiir ka Waxbarashada Mudane Mawliid Haayir xassan, Wasiir ku xigeenka Xafiiska Maaliyada iyo Hormarinta dhaqaalaha Mudane Jamaal Faarax Warmooge waxaana gudoonsiiyay maareeyaha dugsiga hoyga agoonta ee jigjiga Mudane Maxamuud Cumar Nuur